Tencent သည် TheOne.art NFT WeChat အက် ပလီကေးရှင်း ကို ပိတ်ပင် ထားသည် – Pandaily
Feb 24, 2022, 12:45ညနေ 2022/02/24 14:12:47 Pandaily
“ TheOne.art NFT” လို့ အမည် ပေးထားတဲ့ WeChat အက် ပလီကေးရှင်းTencent မှ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ရက်တွင် တားမြစ် ခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်း၏ ဒစ်ဂျစ်တယ် စုဆောင်းမှု ၀ န်ဆောင်မှုများသည် ခွင့်ပြုချက် မရှိသော ၀ န်ဆောင်မှု အမျိုးအစား များ နှင့်သက်ဆိုင် သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ပြည်တွင်း စီးပွားရေး သတင်းအချက်အလက် ပလက်ဖောင်း ကို ကောင်းကင် မှ စစ်ဆေး မှုအရ “ TheOne.art” ဒီဂျစ်တယ် အနုပညာ e-commerce ပလက်ဖောင်း သည် Weiyi (Hangzhou) Digital Technology Co., Ltd. ၏တစ် ခု တည်းသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဖြစ်သည်။
ပလက်ဖောင်း ၏တရားဝင် ဝက်ဘ်ဆိုက် တွင်လည်း TheOne.art သည်လက်ရှိ မူဝါဒ များအရ လိုက်နာ မှုဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အရည်အချင်း များစွာ ကိုရရှိ ခဲ့သည်ဟု ရေးသားခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်မေလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် မှတ်ပုံတင် ထားသည့် အရင်းအနှီး ယွမ် ၃၇ ၂၂, ၂ ၁၉ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅ ၈၉, ၆ ၂၁) ဖြင့် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အောက်တိုဘာလတွင် ကုမ္ပဏီက အိန် ဂျယ် အလှည့်ကျ ရန်ပုံငွေ ယွမ် ၁၀ သန်း ပြီးစီး ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
အရBlockchain နေ့စဉ်ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် WeChat တွင် အသေးစား ပရိုဂရမ် များကို ပိတ်ပင် ထားသော်လည်း သုံးစွဲ သူများသည် Alipay မှတစ်ဆင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် ထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ် နိုင်သည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်ညနေ ၆ နာရီတွင် “ Rudolph and His Friends” အမည်ရှိ ဒစ်ဂျစ်တယ် စုဆောင်းမှု သည်စုစုပေါင်း မိတ္တူ ၅၀၀၀ ရောင်း ချပြီး ၂၉. ၉ ယွမ် ဖြင့် ရောင်းချ ခဲ့ပြီး မကြာမီ တွင် ရောင်းချခဲ့သည်။
အွန်လိုင်း မစတင် မီ ၁၀ မိနစ် အလို တွင် TheOne.art ပလက် ဖော င်းက “ WeChat ဝယ်ယူ မှုနှင့် ငွေပေးချေမှု ကိုမ ထောက်ပံ့ ပါ” ဟု စာလုံးမည်း ဖြင့် ၀ ယ်ယူ သည့် လမ်းကြောင်း များအကြောင်း ပို့စ် တစ်ခုကို တင်ခဲ့သည်။ သုံးစွဲ သူများသည် ဓာတ်ပုံ အယ်လ်ဘမ် သို့ သိမ်းဆည်း ပြီး Alipay သို့ အရောင်းအ ၀ ယ် လုပ်ရန် အကြံပြုသည်။
အစောပိုင်းက စျေးကွက် ကောလာဟလ များအရ အစိုးရ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များသည် NFT သို့မဟုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ် စုဆောင်း မှုများအတွက် လိုအပ်ချက်များကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဒီ အခ်က္အလက္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာ ဌာန ေတြက အတည္မျပဳ ႏိုင္ ေသးပါဘူး။ သို့သော် ပြီးခဲ့သည့်နှစ် အောက်တိုဘာလတွင် Tencent ၏ “ Huanhe” နှင့် Antchain ၏ “ Cetany” တို့သည် ၎င်းတို့၏ ပလက်ဖောင်း ပေါ်ရှိ “ NFT” ဟူသောစကားလုံး ကို ဖျက် ၍ “ ဒစ်ဂျစ်တယ် စုဆောင်းမှု” သို့ပြောင်းလဲ ခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:တရုတ် NFT အပတ်စဉ်: ရေခဲ ဆိပ် ခံတံတား NFTS!
ထို့အပြင် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ရက်တွင် BCRC သည် “ Yuancosmic” နယ်ပယ်တွင် တရားမ ၀ င် ရန်ပုံငွေ ရှာဖွေခြင်း အန္တရာယ် ကို ကာကွယ်ရန် သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ရာဇ ၀ တ်သား များသည် Yuancosmic Investment Project “ နှင့်” Yuancosmic Chain “ ဟူသော အမည်ဖြင့် ရန်ပုံငွေ များ ကိုမြှင့်တင် ခဲ့သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းတို့သည် တရားမ ၀ င် ရန်ပုံငွေ ရှာဖွေ ခြင်း၊ လိမ်လည်မှု နှင့်အခြား ရာဇ ၀ တ် မှုများအတွက် သံသယ ရှိသည်။ သတိပေး ချက်အရ ပြည်သူလူထု အနေဖြင့် အန္တရာယ် ကာကွယ်တားဆီး ရေး ကိုပိုမို သိ ရှိလာ ရန် လိုအပ်ကြောင်း ကိုလည်း အလေးပေး ပြောကြားခဲ့သည်။
NFT သည္ တ႐ုတ္အႏုပညာေစ်းကြက္၏ အရွိန္အဟုန္ အၫႊန္႔ဟု ထင္မွတ္ရေသာ္လည္း စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနဆဲဟု
NFT စန္းပြင့္သည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ တ႐ုတ္႐ိုးရာအႏုပညာေလာကသို႔ ေရာက္လာခဲ့ၿပီး မယံုႏိုင္စရာ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ ႏႈတ္ဆက္ရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့ကာ အလားအလာေကာင္းသည့္ ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္းမ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့သည္။